Automation Desk Ọrụ IT - Motadata
Maka Oche Ọrụ IT akpaaka eji akpa
Wedata mbọ aka na ọnụ ahịa ya na akpaaka siri ike
Kwanye ndị nlekọta IT ike ka ha megharịa usoro na-agwụ ike iji kwalite nrụpụta yana melite ogo ọrụ enyere ndị ahịa.
Ihe ịma aka IT ọrụ Desk akpaaka
Site na ụda na-eto eto na mgbagwoju anya nke ajụjụ nkwado, ịdabere na ọrụ aka naanị agaghị adị mma. Ọzọkwa, iwere na idowe otu IT tozuru oke maka nkwado ka bụ ihe ịma aka maka azụmaahịa. Yabụ kama itolite otu gị na ịbawanye ọnụ ahịa n'elu, tụlee ịbawanye arụmọrụ ndị ọrụ gị site na enyemaka nke teknụzụ.
a na-eji na-arụ ọrụ ndị dị ala nke ngalaba IT.
Iji mee ka ọ dị irè n'ezie ma bulie uru nke ọrụ ndị ị na-enye, oge eruola ka ị tụlee otu esi eme ka njikwa desktọpụ ọrụ na-akpaghị aka.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka IT Ọrụ Desk Automation
Melite nnyefe ọrụ ndị ahịa site na ịnye mkpebi ngwa ngwa
Megharịa usoro dị n'ime site na iji arụ ọrụ arụ ọrụ
Iji Motadata ServiceOps Service Desk akpaghị aka usoro dị ka nhazi njirimara ọtụtụ ihe, nrụpụta okwuntughe, nkwenye nchekwa maka imeghe akaụntụ, wdg.
Nke a na-enye ohere maka otu IT iji dozie okwu n'otu oge ma mee ka oge mkpebi dị ngwa maka ihe omume dị mfe.
Anyị mfe ịdọrọ na dobe interface na n'ime igbe workflows e mere ka ị malite ozugbo.
Nyefee tiketi ndị ziri ezi
Tiketi tiketi bụ igbu oge maka ndị otu nkwado, ọ na-agbatị nzaghachi na oge mkpebi, na-emebi ahụmahụ ndị ahịa.
Desktọpụ ọrụ Motadata ServiceOps na-enye atụmatụ arụnyere arụnyere na-emezi usoro nke ịnweta arịrịọ na ngalaba, otu, na/ma ọ bụ ndị mmadụ dabere na nnweta ha.
Jiri akpaaka jikwaa mmebi iwu SLA
Ikpokoro anyị na-enye ikike ịbawanye tiketi na-akpaghị aka ma ọ bụ zipu ọkwa banyere mmebi SLA site na ịkọwapụta iwu akpaaka iji dabara ihe ndị ị ga-ebute ụzọ tiketi.
Nweta visibiliti n'ime nnyefe ọrụ gị site na idobe arụmọrụ gị megide SLAs.
Nweta nzaghachi n'aka ndị ahịa
Ọnụego mkpebi dị elu na oge obere mkpebi abụghị metric ga-etu ọnụ ma ọ bụrụ na ndị otu na-enweta ha site na imechi tiketi nwere nsogbu edozibeghị.
Soro ndepụta afọ ojuju ndị ahịa, na-eji ikpo okwu anyị, site na iwepụta nzaghachi maka arịrịọ ọ bụla edoziri.
Megharịa usoro ahụ dum iji jide n'aka na ị na-anakọta nzaghachi mgbe niile.
Uru Maka IT ọrụ Desk akpaaka
Automation dabere AI na akpaaka nwere ọgụgụ isi iji kwalite usoro azụmahịa gị.
Gbaa usoro akọwapụtara nke ọma na tiketi dabere na ọnọdụ ụfọdụ.
Codeless na Dynamic multi-level Workflow automation iji nye ndị nlekọta IT ike imepụta iwu azụmaahịa omenala.
Smart Beler Balear
Kenye tiketi na-akpaghị aka dabere na ọkwa nka, mkpa, nnweta, iwu akọpụtagoro na ibu ọrụ nka.